Ousmane Dembele oo iska diiday dalabkii ugu dambeeyey oo ay hordhigtay Kooxda Barcelona – Gool FM
Ousmane Dembele oo iska diiday dalabkii ugu dambeeyey oo ay hordhigtay Kooxda Barcelona
Haaruun November 29, 2021
(Barcelona) 29 Nof 2021. Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa lagu soo warramayaa inuu diiday dalabkii ugu dambeeyay ee kooxdu ay ka saxiixday heshiis cusub.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa Blaugrana uu dhacayaa, waxaana uu ku jiraa bilihii ugu dambeeyay, iyadoo lagu wado inuu noqdo beeca xorta ah dhammaadka xilli ciyaareedkan 2021-22.
Kooxda Blaugrana ayaa ka shaqaynaysa sidii ay Dembele heshiis cusub ugu saxiixi lahayd oo ay ugu sii haysan lahayd garoonka Camp Nou, iyadoo tababare Xavi uu xaqiijiyay inuu doonayo inuu sii joogo ciyaaryahankii hore ee Borussia Dortmund.
Si kastaba ha noqotee, Wargeyska Sport ayaa warinaya in Dembele uu diiday dalabkii ugu dambeeyay Barcelona ee dib u cusbooneysiinta heshiiskiisa, sababtoo ah xaqiiqda ayaa ah inuu haysto dalab wanaagsan oo uu ka haysto kooxo kale sida uu Wargeysku qormadiisa ku sheegay.
Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay u aragto Dembele mid ka mid ah bartilmaameedyada mudnaanta koowaad u ah sanadka soo socda, laakiin waxaa la rumeysan yahay inay tartanka loogu jiro saxiixa 24-sano jirkaan ku soo biirtay Kooxda Newcastle United.
Dembele ayaa kaliya saftay saddex kulan xilli ciyaareedkan sababo la xiriira dhaawac hareeyey, isagoo garoomada soo muuqday markii ugu horeysay xilli ciyaareedkii 2021-22 kulankii horyaalka La Liga, waxaana uu ka soo kacay kursiga keydka kulankii Villarreal ee todobaadkan.
Manchester City oo isku dayaysa inay la soo wareegto Weeraryahanka Kooxda Real Madrid ee Karim Benzema
RASMI: Kooxda Manchester United oo ugu dambeyn ku dhawaaqday Macallinkeeda cusub ee Ralf Rangnick